Qiimaha Soy Lecithin, Alaab -qeybiye ka socda Bolise
[Magac kale] Soybean Lecithin; Soya Lecithin
[Muuqaal] Powder ganaax fudud oo huruud ah
1. Soya lecithin waxaa loo isticmaalaa ka hortagga iyo daaweynta atherosclerosis.
2. Waxay ka hortagi doontaa ama dib u dhigi doontaa dhacdada asaasaqa.
3. Waxay burburin kartaa jirka sunta, waxay leedahay waxtarka maqaarka cad.
4. Soya lecithin waxay leedahay hawsha yaraynta heerarka kolesteroolka dhiigga, waxay ka hortagtaa cirrhosis, waxayna gacan ka geysataa soo kabashada shaqada beerka.
5. Waxay gacan ka geysan doontaa in la tirtiro daalka, la xoojiyo unugyada maskaxda, la hagaajiyo natiijada xiisadda neerfaha ee ay keento samir -darro, xanaaq iyo hurdo la’aan.
Ku saabsan Soy Lecithin
Waxay leedahay codsi aad u ballaaran maxaa yeelay waa badeecad emulsifying. Waxaa loo adeegsadaa soo saarista cuntooyinka kala duwan sida majones, shokolaatada, shukulaatada, margarine, jalaatada, buskudka iyo ciridka.
Soy Lecithin waa walax cajiib ah oo lagu daro cuntadaada cuntada iyo daryeelka jirka. Waxay ka kooban tahay guryo badan oo faa'iido leh, waxaana loo isticmaalaa sidii emulsifier, dhumucdiis, dejiye, ilaaliye khafiif ah, qoyaan, iyo nuugid. Lecithin waxaa looga faa'iideysan karaa ku dhawaad ​​cunto karis kasta, waxaana caadi ahaan laga helaa cuntada iyo waxyaabaha la isku qurxiyo labadaba.
Cosmetically ahaan, lecithin soy waxaa lagu dari karaa kiriimyada, qurxinta, shaambooyada, qaboojiyaha, maydhashada jirka, balimooyinka dibnaha, iyo alaabo kale oo badan.Soy lecithin sidoo kale waa beddel weyn oo u leh wakiilada kale ee emulsifying iyo xasilinta, kuwaas oo qaarkood laga soo qaatay ilaha batroolka.
Waxaa loo adeegsadaa shaqooyinkeeda ballaaran iyo nafaqada.